LG G6, notsapainay izany tamin'ny MWC 2017 | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | LG, MWC, hevitra
LG tsy nanana ny fahombiazana andrasana amin'ny LG G5-ny. Tena feno ny telefaona ary namela fahatsapana tena tsara ho antsika rehefa nanana fotoana hanandramana azy izahay. Fanentanana iray tsy dia mifantoka loatra amin'ny resaka doka, ny fahatarana tara loatra teo amin'ny tsena ny vidin'ny terminal sy ny vidin'ny modules-ny, nahatonga an'i LG hanilika ny famoronana ary hanolotra telefaona mahazatra kokoa: LG G6.
Mazava ho azy, ity telefaona ity dia tsy manana modules afaka apetaka amin'ilay fitaovana fa misy antsipirihany tena mahaliana ihany koa, toy ny endrika kanto na rafitra fakan-tsary roa izay hahagaga anao. Ireo no ahy fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny LG G6 ao amin'ny MWC 2017.
Telefaona misongadina amin'ny endriny eo anoloana
Tonga lafatra fotsiny ny asa vitan'ny ekipa mpamolavola LG. Mahatsiaro tena tsara eo am-pelatanany ny telefaona, miaraka amin'ilay chassis aluminium sy vera mahamay izay manome fikitihana premium be ny terminal.
Iray amin'ireo antsipiriany mahavariana hitantsika eo aloha. Ny efijery LG G6 dia mitaky saika ny faritra iray manontolo, noho ny zana-kazo mihena amin'ny fiteny farafaharatsiny ary izany no mahatonga ny Tontonana IPS 5.7 inch Izy io dia mifanaraka amin'ny terminal misy refy voafehy tokoa.
148.9 × 71.9 × 7.9 mm no refesin'ny LG G6 izay, miaraka 163 grama ny lanjany, ataovy fitaovana mora ampiasaina ity finday ity, na dia manana efijery lehibe be aza izy.
Fanamafisana manokana ny ao aoriana, miaraka amin'izany sensor sensor izay miasa toy ny bokotra LG G6 on / off ary izany dia manome fikitihana hafa amin'ny telefaona, miverina amin'ny niandohan'ny G3 miaraka amin'io toerana io izay mampiavaka ny fanaraha-maso sy ny famonoana. Mazava ho azy, ny bokotra fanaraha-maso ny feony dia mbola hita eo amin'ny sisin'ny telefaona.
Mila milaza aho fa ny asa vitan'ny LG dia tsara indrindra amin'ny fanaovana an'io ny G6 dia telefaona manintona tokoa, miaraka amin'ny famaranana sy ny fitaovana matanjaka izay midera azy eo an-tampon'ny indostria.
modely LG G6
Operating System Android 7.0 Nougat miaraka amina LG UX6 customization layer
efijery Quad HD + IPS aseho miaraka amin'ny vahaolana 2880 × 1440 teboka miaraka amin'ny teknolojia Dolby Vision HDR10
processeur Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core amin'ny 2.35 Ghz
GPU Adreno 530 hatramin'ny 650 Mhz
Tahiry anatiny Modely 32 / 64Gb miaraka amin'ny fanohanana Micro SD hatramin'ny 2TB
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsary Dual 13 Mpx misy zoro 125º
Fakan-tsary aloha 5 Mpx misy zoro mirefy 100º
Fitaovana hafa Mpamaky ny dian-tànana amin'ny lamosina / vovoka sy fanoherana ny rano / Mpanampy Google napetraka ho fanao mahazatra - loko misy Platinum Mystic White sy Astral Black
lafiny 148.9 × 71.9 × 7.9 mm
vidiny to be determined
Araka ny nampoizina ny LG G6 dia tampon'isa miaraka amin'ny toetra teknika amin'ny haavon'ny terminal misy ireo toetra ireo. Araka ny efa hitanao tamin'ny fijerinay horonantsary voalohany, misy fampahalalana roa izay mahatonga ity telefaona ity ho fitaovana manokana.
Amin'ny lafiny iray dia manana ny efijery mampino azy isika 2-inch 5.7K izay manasa anao hankafy ny atiny multimedia noho ny kalitaon'ny tontonana matanjaka ao aminy. Ary amin'ny lafiny iray, ny rafitra fakan-tsary avo roa heny izay mamela izany
Ny marina dia ny LG G5 dia telefaona nahafinaritra, na dia tsy nanantena fahombiazana aza izany. Ankehitriny, ny mpanamboatra Koreana dia nanamarika ny lesoka nataony ary miverina manome telefaona mahazatra kokoa izy fa miaraka amina fikitihana hafa miaraka amin'ilay fakantsary indroa mahery sy ny efijery fanapaha-kevitra 2K tsy mampino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG G6, notsapainay tao amin'ny MWC 2017
Ny lalao Shadowmatic, fahombiazana lehibe amin'ny iOS, dia tonga tamin'ny Android ihany